Maxkamad ku taala Mareykanka oo la soo taagay Soomaali lacag u Diray Alshabaab – SBC
Maxkamad ku taala Mareykanka oo la soo taagay Soomaali lacag u Diray Alshabaab
Muwaadin Soomaali ah oo lagu magacaabo Ahmed Hussein Mahamud oo ah 27 jir degan wadanka Mareykanka ayaa ka hor qirtay Maxkamad ku taala Minnesota inuu taageero dhaqaale u diray Xarakada Alshabaab ee Dalka Soomaaliya sida ay sheegeen Xeer ilaalinta.
Mr Ahmed ayaa waxaa lagu eedeynayaa in bishii june ee sannadkii 2011 uu bilaabay qorshe dadka degan Gobolka Minnesota ee soomaalida ah looga uruurinayo Lacago iyadoo loo sheegay dadkaas in lacagtaas lagu dhisayo Masjid iyo waxqabad loo sameynayo Dad Agoon ah balse markii danbe loo weeciyay dhinaca Xarakada Alshabaab.
ninkan Soomaali Mareykanka ee la hayo ayaa waxaa la sheegay in lacagaha uu ka aruuriyay dadka Soomaalida uu u isticmaalay siyaabo kala duwan sida in lacagaha qaar tiket diyaaradeed loogu jaro dagaalyahano ku biiriya Alshabaab.
Ahmed Hussein hadii uu danbigan si dhameystiran ugu cadaado waxaa uu muteysan Xukun gaaraya 15 sanno oo xarig ah waxaana u ku biirayaa Soomaali horey dalkaas loogu qabqabtay oo lala xiriirinayo Taakuleynta Alshabaab.
Gobolka Minnesotaoo ah gobolka ugu balaran ee Soomaalida Dalkaasi Tagta ay degan yihiin ayaa waxaa dhowrjeer oo hore laga soo qabtay soomaali kale oo lagu eedeynayo inay dhaqaale u direen Xarakada alshabaab ee Dalka Soomaaliya.
Dhawaan ayay ahayd markii laba haween ah oo aad u da’aweyn lagu xukumay gudaha wadankaasi Mareykanka ka dib markii lagu eedeyay inay dadka ku wacyigeliyeen Taakuleynta Xarakada Alshabaab ee Dalka Soomaaliya.
sayid abdulkadir aden ahmed says:
Febraayo 7, 2012 at 11:35 am
wa ku saxan yihiin